China Phone Charms mveliso kunye nabenzi | SJJ
Umzi-mveliso wethu unikezela ngeentlobo ngeentlobo zeefowuni eziphathwayo ezenziwe ngezinto zentsimbi. Iintsimbi zefowuni zentsimbi ziyafumaneka nge-2D okanye uyilo lwe-3D. Imifanekiso yekhathuni okanye i-mascot yesiko kunye nelogo zonke ziyasebenza.
Kukho iintlobo zesitayile esinokuhonjiswa ngu-Pretty Shiny. Iikhubalo zefowuni zihlala zixhunywe kwisixhobo esiphathwayo ngesidibanisi sefowuni okanye iplagi yesilicone, ezinye iifowuni zinokuba nomngxunya wokuloba onokuthi uqhotyoshelwe umtya kunye nemitya yefowuni ikwasebenza imisebenzi eyongezelelweyo njengokucoca isikrini. Ngaphandle komtsalane,abanini beefowunizishushu kakhulu. Iicharms zinokongezwa kumnini ukuze ziyenze intle kwaye isebenziseke, i-Pretty Shiny idlala indima ekwenzeni ukuba iinyibiba zibe luphawu ngakumbi. Uluhlu lwentsimbi, sinokubonelela nge-PVC, i-silicone, ulusu, imfakamfele ukuyenza. Inkonzo yasimahla yobugcisa kunye neesampulu ezikhoyo ezikhoyo ziyafumaneka. Ukuba unomdla, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ukubumba ezikhoyo ziyafumaneka
Ukuncamathisela komtsalane: idayimane, ukukhanya kwe-LED, isicoci sekhusi, ukosula isikrini, ibhola yebhola
Umhombiso: ixhonywe kwisitshixo, iselfowuni, iikhamera, iibhegi, iilaptops
Ubukhulu ngentando, imibala, iilogo.
Egqithileyo Iimpawu zewayini
Okulandelayo: Iibheji zeMoto zeGrille kunye neMifuziselo yeeMoto
iintsimbi zomnxeba zesinyithi
Iikhubalo zefowuni ephathekayo
I-Antibacterial TPU yeFowuni